Mashaariic Horumarineed oo laga bilaabey Warshiikh +Sawiro – Radio Muqdisho
Mashaariic Horumarineed oo laga bilaabey Warshiikh +Sawiro
Magaalada Warsheekh ee Gobolka Shabeellada hoose ayaa ka soconaya Mashaariic lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha, wax barshada, caafimaadka iyo bilicda degaanka.
Mashaariicda haatan ka socota ayaa waxaa ka mid ah Isbitaal, xarumo Wax barasho.
Dadka ku dhaqan Degmada iyo degaannada ku dhaw Warshiikh ,ayaa loo sameynayaa Dhismaha wadada isku xirta Degaanadaasi iyo dhismaha Waddada isku xirta Muqdisho iyo Warshiikh,mahaariicdaas ayaa waxaa hirgalinaya hay’adda Critical Hope Foundation oo fadhigoodu yahay Waddanka Koonfur Afrika.
Dhawaan Wafdiga ka socda Wadanka Koofur Africa oo wada mashaariic kala duwan ee lagu hormarinayo Gobolka Shabeelaha dhexe , gaar ahaan Degmada Warshiikh, iyo maamulka Gobolka shabeelaha dhexe kan degmada warshiiq wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamul goboleed hir shabeele ayaa waxay kormeer ku tageen, deegaano uu ka mid yahay degaanka Qeyla weyne oo ka tirsan Degmada Warshiikh, kaasi oo horay looga hir galiyay iskuul hoose dhexe iyo M C H oo ay ka dhistay hey’adda givt of givers ee laga leeyahay wadanka koofur africa waxaana munaasabad lagu soo dhaweynayay mashaariicdaasi lagu hormarinayo degmada warshiikh gaar ahaan gobolka shabeelaha dhexe lagu qabtay xarunta degmada warshiikh.
Gudoomiyaha Degmada Warshiikh Axmed Xuseen Axmed [Axmed shiidka ] oo munaasada ka hadlay ayaa ugu mahadceliyay masuuliyiinta ka socday wadanka koofur afrika ee deegaanka hir galinayo howlaha hormarineed ,
‘Reer warshiikhow waxaad kudadaashaan waxbarashada iyo horumarka degmada, hadaad waxbarataan waxaa lagaarayaa horumar, waa in loo diraa carruurta iskuulada oo la iskuwadaa waxbarashada maadiga ah iyo tan diiniga ah’ ayuu yuru gudoomiyaha degmada warsheekh.
Mrs Nxumalo louisa oo ka socotay Hay’adda critical hope foundation ee wadanka koofur afrika ayaa sheegtay in ay ka hirgalinayaa mashaariic lagu hormarinayo Degmada Warshiiq iyo Guud ahaan Gobolka shabeelaha dhexe.
‘waxaan soo arkay barwaaqo aad u ballaar oo kajirta Wadankaan soomaaliya, taasoo aan laga helin wadanka koonfurka afrika, laakiin idinku ma dareemeysaann, warsheekhna waa meel aad u qurxoon, waxaana isku afgaranay aniga iyo maamulka inaan iska kaashano dhanka horumarka ee degmada iyo guud ahaan gobolka.
Gudoomiyaha Gobolka Shabeelaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa sheegay in loo baahanyahay shacabka ku nool gobolka shabeelaha dhexe ay ka qeyb qaataan howlaha horumarineed ee ka soconaya gobolka .
‘waxaan ugu baaqayaa bulshada kudhaqan gobolka shabeelaha dhexe inay ka shaqeeyaan horumarka gobolka gobolkooda oo ay horumariyaan adeegyada aasaasiga ee gobolkooda.
Wasiirka Wasaaradda Kaluumeysiga iyo kheyraadka Badda ee Dowlad Goboleedka Hirshabeele C/llaahi Macalin Mustaf ayaa ka hadlay muhiimada howlaha mashaariicda ee lagu hormarinayo degmada warshiiq iyo guud ahaan gobolka
’ Reer warshiikhow waxaad ku dadaashaan waxbarashada iyo horumarka Degmada, haddaad waxbarataan waxaa la gaarayaa horumar, waa in loo diraa Carruurta Iskuulaadka, waana in la isku wadaa waxbarashada maadiga ah iyo tan Diiniga ah. ‘ ayuu yiri wasiirka.
Meelo badan oo ka mid ah Gobolka Shabeellada dhexe ee Maamulka Hirshabeele waxaa ka soconaya Horumar aad u Ballaaran, kuwaasoo kaalin weyn ka qaadanaya soo nooleynta dhaq-dhaqaaqyada ganacsi, caafimaad iyo wax barsho ee degaannadaas, waxana si weyn usoo dhaweeyeen Dadka halkaasi ku dhaqan.
Rag dhac isku baheystay oo ay Maxkamadda Ciidamadu xukuntay
DEG DEG: R/wasaaraha XFS oo shaqo joojin ku sameeyay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya